Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda adag ee ka taagan degmada Qoryooley ee gobolka Sh/Hoose | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda adag ee ka taagan degmada Qoryooley ee gobolka...
Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda adag ee ka taagan degmada Qoryooley ee gobolka Sh/Hoose
Two young boys sit on tires on the side of the road in Qoryooley during a routine foot patrol by African Union troops one month after the town was liberated from Al-Shabab militants.
Qoryooley (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya Degmada Qoryooley ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya inay xaalad adag ku soo korortay degmadaasi, ka dib markii la burburiyay buundadii ugu weyneyd ee degmadaasi.
Maleeshiyada Ururka Al-Shabaab oo maalintii Arbacada weerar xoogan ku qaaday Degmada Qoryooley ayaa waxaa u suurta-gashay inay qarax ku burburiyan buundadaasi, oo Talyaaniga uu dhisay sanadkii 1954-kii, waxaase la fashiliyay oo laga hortagey qarax kale, oo ay doonayeen inay ku burburiyaan buundada labaad ee degmadaasi ku taala.
Buundada la burburiyay ayaa ahayd midda keliya ee ay adeegsan jireen amaba mari jireen gaadiidka ganacsiga sida iyo kuwa kale ee xamuulka ah ee tagga Degmada Qoryooley, oo qiyaastii 120km u jirta Magaalada Muqdisho.
Tan iyo Arbacadii ayuu hakad ku yimid gaadiidkii ganacsiga iyo khudaartaba keeni jiray Degmada Qoryooley, sababo ku aadan iyagoo aan isaga kala gudbi karin buundada kale, ee aan la burburin.
Gudoomiyaha Degmada Qoryooley, Siid Cali Ibraahim ayaa sheegay in maleeshiyada Shabaabku ay buundadaasi ku qarxiyeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, iminkana ay buundadu tahay mid aan la mari karin.
“Buundada ay u suurta-gashay inay qarxiyan ayay ku xireen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay. Buundada hadda way baaba’san tahay, wax gaari ama dad ah oo mari karo haba yaraatee ma jiraan.” Ayuu yiri Gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha ayaa xusay inay buundadaasi lafdhabar u ahayd dhaqdhaqaaqa Degmada Qoryooley, waxa uu intaa ku daray in burburinteeda ay saamayn ku yeelatay tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi.
“Burburka buundada waxay saamayn ku yeelatay tuulooyinka hoos-yimaada, sida Baxnaano, Teegow, Cabdi Cali iyo tuulooyin kaloo badan. Waxay kaloo saamayn ku yeelatay dalaga beeraha iyo khudaartii soo go’day inay gaadiidka keenaan Degmada Qoryooley. Halbowle ayay buundada u ahayd degmada, lafdhabarta degmada buundadaas ayay ahayd.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Qoryooley.
Gudoomiye Siid Cali oo la hadlay VOA ayaa ujeedada ay Shabaabka u burburiyeen buundada Degmada Qoryooley waxaa uu ku sheegay, sidii ay degmadaasi u go’doomin lahaayen.
“Ujeedadooda waxay ahayd inay degmada go’doon geliyaan, labada buundaba ay qarxiyan, laakiin mid ayuu Alle noo badbaadiyay.” Ayuu yiri Siid Cali Ibraahim, Gudoomiyaha Degmada Qoryooley.
Gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay inaanay Degmada Qoryooley joogin askar ka tirsan kuwa Dowladda Federaalka, kuwa iminka joogana ay yihiin ciidan madani ah, oo isu xil saaray inay degmada ka difaacaan Shabaab, waxaana uu Madaxda Qaranka ugu baaqay in la qarameeyo ciidankaasi, xuquuqdoodana la siiyo.
Degmada Qoryooley oo bishii March ee sanadkii 2014 laga saaray maleeshiyada Al Shabaab ayaa waxay u nugushahay weeraradooda, iyadoona dhawr jeer oo hore, ay sidaanoo kale u weerareen.
Xaaladda adag ee ka taagan degmada Qoryooley